Alaabta Scruchies iyo Warshada - Shiinaha Scruchies Soosaarayaasha
Women Silk Scrunchie Box Custom Logo timaha xariirta agabyada timaha xariirta
Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? Sida ku dhawaad ​​dhammaan '90-meeyadii isbeddellada, shaandhaynta timaha ayaa si weyn ugu soo noqday labadii sano ee la soo dhaafay, iyo sababta ay weligood uga tageen meesha ugu horreysa?! Qaababku aad bay u xiise badan yihiin oo waxay isugu jiraan kuwo aad u yaryar, nashqado dhuuban ilaa kuwa ka weyn, kuwo bayaan ah. Maxaa kale oo macluumaad ah oo aad u baahan tahay? Iyadoo ay ku jiraan dhar kala duwan - suuf, linen, iyo xitaa maro terry! Walaxda siman ayaa yaraynaysa...
jumlo 25mm 22 mm 19mm 16mm silk scrunchies scrunchies naqshadeynta timaha xariirta 100% xariir xariif ah oo saafi ah
Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? 100% xariijimaha xariirada xabagta saafiga ah waxay ka dhigtaa dhammaan noocyada timaha inay noqdaan kuwo caafimaad qaba oo la maarayn karo iyadoo yaraynaysa khilaafka u horseeda daraf, jab iyo daataan. Aad bay ugu talinayaan stylists timaha curdan. Waxay ka caawisaa inay timaha caafimaad qabaan iyadoo hoos u dhigaysa jiidista iyo jiidista timaha. Xariirta jilicsan waxay caawisaa inay timuhu dul maraan dabada xariirta, iyadoo yaraynaysa jebinta waxayna yaraynaysaa laalaabkii timaha. Xidhiidhka timaha xariirta ayaa xoogaa raaxo iyo soo jiidasho leh ku soo kordhiya hawl maalmeedka daryeelka timaha. Oeko-Te...
100% Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah ee Timaha Dhabta ah ee Timaha Dumarka Xariiraha Xariiraha
Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? Waxaan isticmaalnaa xariirta hooyada tayada ugu sareysa. Xariirteena mulberry waxay ka samaysan tahay xariir raagaya. Sababtaas awgeed, xariirteenu ma aha oo kaliya jilicsan, laakiin sidoo kale waxay leedahay nolol aad u dheer. Xariirta aan isticmaalno ma dhaawiciso ama ma soo jiido qoyaan timahaaga, markaa hadda timahaagu ma engegi doonaan isticmaalka xoqidda. Sidoo kale, sababtoo ah xariirka jilicsan ee jilicsan, ma jiri doonto kinks oo waxaad awoodi doontaa inaad timahaaga si degdeg ah u xirto. Laba qaybood oo kala duwan oo silk ah oo nadiif ah oo nadiif ah ...
Jumlo tayo sare leh Midab gaar loo habeeyey silk scrunchies xariir timaha
Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? Walxaha tayada sare leh: Xariirkan scrunchie waxa uu ka samaysan yahay 100% xariir xabag ah. Silk scrunchie oo la xoojiyay: sirta quruxda timaha caanka ah waa mulberry silk scrunchies, kuwaas oo jilicsan oo jilicsan oo aan waxyeello u geysan timaha. Faa'iidooyinka: xoqitaanka xariirta ayaa ah kuwa ugu fiican ee lagu daro meelaha lagu qurxiyo. Xarig-xariireedka tayada sare leh waxaa loogu talagalay inuu si habsami leh uga baxo timahaaga adoon jiidin, nabar ama timo jebin inta aad joogtid. Laastiga ku habboon: ballaca abo...
Naqshadeeyaha Xariirta Scrunchies Midabka caanka ah 100% Xariir saafi ah oo loogu talagalay daryeelka timaha
Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? 100% Xariir Xariir ah oo saafi ah: tan ugu fiican ee ilaalinta timaha: laga sameeyay Oeko-Tex 19 Momme shahaadada darajada 6A dharka xariirta ah, kuwan scrunchies ma isticmaalaan satin, polyester ama wax kale oo raqiis ah. Tani waxay keenaysaa difaac kasta oo ka dhan ah jahawareerka, ilko ama dillaac. Cabbirka bilaashka ah: ku habboon dhammaan noocyada timaha: laga bilaabo 10 ilaa 8.7 in, kuwa haysta dabada ponyku waxay ku habboon yihiin ku dhawaad ​​​​dhammaan qaababka timaha waxayna qaban karaan nooc kasta oo timo xariir ah, luul, luul ah, timo toosan ama duuban, wh ...
Tayada sare leh 22 momme Shiny Silk Scrunchies Luxury 100% 6 A Timaha Xariirta ah ee Elastics Scrunchy
Waa maxay sababta aad u dooranayso SILK BONNET? 100% Xariir Xariir ah oo ceeriin ah 6A: Xariirkan laastikada ah wuxuu ka samaysan yahay 100% xariir dabiici ah oo saafi ah oo saafi ah oo leh naqshad qurux badan, 6A, tayo sare leh, jilicsan timahaaga, waara, siman oo aan la hor istaagin. Cabbirka bilaashka ah ee dhammaan oo aan lahayn fiilooyinka, taabasho jilicsan iyo midab qani ah. Cabbirka: 3.94- 8.66 inji (10-22 cm), oo ku habboon dadka badankiisa, dherer kasta, dhumuc ama dhuuban. Tuubo xariir ah oo saafi ah oo aan waxyeello u geysan, jabin ama dhufanin timahaaga, gaar ahaan qaali...
Scrunchie Silk Scrunchies Jumlad Naqshadeeye Macaamiisha Timaha Laastikada ah
Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? Waa maxay sababta xariirta? Xariir saafi ah waxay ilaalisaa timaha, daadashada timaha oo yaraada, timo caafimaad qaba. Xariirada waaweyni waxay leeyihiin qaab dhismeed la mid ah timaha bini'aadamka, muraayadaheenna hurdada xariirta ah waxay ka kooban yihiin 100% amino acids kuwaas oo yareeya dhaawaca timaha, sida kala dillaacsanaanta. Fasalka 6A xariirta bulberry: set timaha hurda xariirta scrunchie waxay ka samaysan tahay 22 momme 100% heer dabiici ah 6A xariirta bulberry saafiga ah Charmeuse, aad u jilicsan oo siman. Hooyadu way weyn tahay, waa ka sii dhumuc weyn tahay xariirta. 22 hooyo mulberr oo saafi ah...
Scrunchies Silk Scrunchie Imaanshaha Cusub Scrunchies Istaag Midab Adag Dabiici ah oo Saafi ah 3.5cm Xariir
Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? 100% saafi ah fasalka xariirta bulberry 6A: saxarada dhabta ah ee xariirta ayaa laga sameeyay 100% heerka xariirta bulberry saafiga ah 6A oo leh dhalaal raaxo leh. Qalab cayriin oo dabiici ah oo saafi ah, wax kiimiko ah haba yaraatee ma jiraan. Waarta, jilicsan oo jilicsan timahaaga. Qarsoodi quruxda: fiilooyinka xariirta ah ee scrunchies waxay leeyihiin qaab dhismeed aad u la mid ah timaha bini'aadamka taas oo ka caawisa yaraynta dhaawaca timaha. Haddii wakhti dheer la isticmaalo, waxay timaha ka dhigi doontaa mid dhalaalaya. Xariir jilicsanina kama bixi doonto mar...
Midab cusub oo tayo sare leh oo qalin ah oo caado ah
scrunchies qurux badan iyo midabyo aad u fiican munaasabadaha oo dhan. Skinny Skinny Scrunchies waxaa laga sameeyaa xariir saafi ah oo tayo sare leh oo la mid ah kuwa barkimada caanka ah. Ku fiican timahaaga, waxay ku yimaadaan 3-xirmo oo midabo ah (Gold, Pink iyo Black). Ma jiro jahawareer, ma jiidid, ma jirto dhaawac…. kaliya silcayn xariir ah oo saafi ah. Hordhac Kooban oo ah Xariir Midab Caadi ah oo qalin ah Xulashada Dharka 100% silk
Astaanta midabka gaarka ah ee jilicsan ee polyester-ka madaxa
Waxyaabaha: 100% polyester
Cabbirka midabka gaarka ah ee naqshadaynta moodada cusub ee madaxa
scrunchies qurux badan iyo midabyo aad u fiican munaasabadaha oo dhan. Skinny Skinny Scrunchies waxaa laga sameeyaa xariir saafi ah oo tayo sare leh oo la mid ah kuwa barkimada caanka ah. Ku fiican timahaaga, waxay ku yimaadaan 3-xirmo oo midabo ah (Gold, Pink iyo Black). Ma jiro jahawareer, ma jiidid, ma laha waxyeelo…. kaliya siman siman silley oo saafi ah. Hordhac Kooban oo ah midabka qalinka caatada ah ee madaxa xariirta Dharka Xulashooyinka 100% xariir, 16MM,19,22MM Magaca badeecada naqshada cusub ee madaxa madaxa Xajmiga caanka ah ee Yoga Headband: dherer:17″,w...
Summada daabacaadda caado u ah xadhig xariir ah midabka
scrunchies qurux badan iyo midabyo aad u fiican munaasabadaha oo dhan. Skinny Skinny Scrunchies waxaa laga sameeyaa xariir saafi ah oo tayo sare leh oo la mid ah kuwa barkimada caanka ah. Ku fiican timahaaga, waxay ku yimaadaan 3-xirmo oo midabo ah (Gold, Pink iyo Black). Ma jiro jahawareer, ma jiidid, ma laha waxyeelo…. kaliya siman siman silley oo saafi ah. Hordhac Kooban oo ah Xarig-madaxeedka caadada u ah midabka qalinka ah Xulashooyinka 100% xariir, 16MM,19,22MM Magaca badeecada xariirta madaxa isku dhufashada Xajmiyada caanka ah ee Yoga Headband: dherer:17″,ballaaran:3...